Iran oo wacad ku martay in ay burburin doonto Yuhuuda haddii Donald Trump uu daandaansado heshiiskooda nukleerka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldIran oo wacad ku martay in ay burburin doonto Yuhuuda haddii Donald Trump uu daandaansado heshiiskooda nukleerka
December 13, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Wasiirka gaashaandhiga dalka Iran Hossein Dehghan. [Sawirka: AFP]
Tehran-(Puntland Mirror) Wasiirka gaashaandhiga dalka Iran Hossein Dehghan ayaa sheegay haddii Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka uu ka baxo heshiiska nukleerka ay sababi doonto khatar ka dhalata xulufada Mareykanka ee Bariga dhexe.
“Cadowgu waxay doonayaan in ay weerar nagu soo qaadaan lagu saleynayo xisaabo khaldan taasina waxay dhaawac muuqda u geysan doontaa awoodooda,” ayuu yiri Hossein Dehghan.
“Dagaal saas oo kale ah waxay la macno tahay burburka Yuhuuda (Israel) waxayna saameyn ku keeni doontaa gobolka oo dhan, sidoo kale waxay sababi kartaa dagaalka aduunka,” ayuu ku daray.
Heshiiska nukleerka, ayaa lagu saxiixay magaalada Vienna bartamihii bishii July ee 2015-ka, waxaana uu ahaa saxiix diblomaasiyadeed oo ahayd tilaabo uu horey u qaaday madaxweynaha xilligiisu dhammaanayo ee Mareykanka Barack Obama.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa horey u balanqaaday in uu ka bixi doono heshiiskaas marka la doorto isaga oo ku tilmaamay “heshiiskii ugu xumaa abid”.
Puntland oo gunaanaday doorashooyinka aqalka hoose